Ny loza ateraky ny telefaona, solosaina & teknolojia fantatra manerana an'izao tontolo izao
Home » Lahatsoratra farany farany » teknolojia » Ny loza ateraky ny telefaona, solosaina & teknolojia fantatra manerana an'izao tontolo izao
Vaovao Mafana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Arabia Saodita • teknolojia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Saudi Arabia dia tsy vitan'ny hoe lasa mpitarika amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manintona ireo fikambanana, fandraisana andraikitra hanana foibe any amin'ny Fanjakana, fa ny King Abdulaziz Center for World Culture koa dia miahiahy ny amin'ny fitaomana ny teknolojia vaovao eo amin'ny sain'ny olona. maha-izy azy, ary ho an'ny fianakaviana.
Rehefa mizatra izao zava-misy iorenan'izao tontolo izao izao, anjakan'ny teknolojia, izao tontolo izao, dia miha-mahazo vahana ny ahiahin'ny besinimaro momba ny loza ateraky ny fihoaram-pefy.
Araka ny fanadihadiana vaovao lehibe iray avy amin'ny andrim-panjakan'ny kolontsaina monina any Saudi Arabia, Ithra, efa ho ny antsasaky ny (44%) ny olona no manahy ny amin'ny fiantraikan'ny fampiasana Internet sy smartphone amin'ny fahasalamany.
Amin'ny hetsika iray hanombohana ny fandaharan'izy ireo momba ny fahasalamana nomerika - Sync, Ithra dia nanambara drafitra amin'ny fihaonambe an-tampony eran-tany, hatao amin'ny volana Desambra.
Araka ny fanadihadiana, ny ankamaroan'ny maro an'isa (88%) amin'ireo mpamaly manerantany dia manaiky fa ny teknolojia dia mety ho hery lehibe amin'ny fandrosoana, miaraka amin'ireo tombony lehibe ao anatin'izany ny fidirana amin'ny vaovao, ny fifandraisana ary ny fahalalahana.
Ny ankamaroan'ireo tombontsoa ireo dia nasongadin'ny valan'ny COVID-19, miaraka amin'ny haitao 64% amin'ny fampindramam-bola amin'ny fanampiana amin'ny ady amin'ny areti-mandringana. Ny vokany, na izany aza, dia saika ny olona rehetra (91%) dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny Internet vokatr'izany.
Abdullah Al-Rashid, talen'ny fandaharana fijanonana nomerika an'i Ithra Hoy izy: "Amin'ny maha-fikambanana natokana ho an'ny fampiroboroboana ny isam-batan'olona, ​​izahay Ithra dia maniry ny hahafantatra ny fiantraikan'ny kolontsain'ny fiankinan'ny olombelona amin'ny internet sy amin'ny media sosialy. Mampalahelo fa ny fikarohana nataonay dia mampiseho fa ny antsasaky ny olona mino fa ny fiankinan-doha tanteraka amin'ireo sehatra ireo dia manimba ny fiadanany.
Izany no antony anombohanay Sync - tetik'asa vaovao natao hananganana fahatsiarovan-tena momba ny fahasalaman'ny dizitaly, hanohana ny fikarohana vaovao miaraka amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny sehatra manerantany, ary hampivondrona ireo mpitarika eritreritra erantany mba hitady fomba vaovao hiarovana ny vahoaka. ”
Hery matanjaka ho an'ny tsara!
Tezitra noho ny fitomboan'ny ahiahy
Na eo aza izany fahatsapana ifotony izany, ny zavatra hitan'i Ithra dia nanasongadina ny ahiahy lehibe momba ny voka-dratsy ateraky ny fidirana tsy voamarina:
Amin'ny resaka fifandraisana, 42% amin'ireo mpamaly no mino fa mampihena ny fotoana laniana amin'ny olon-tiany ny teknolojia, ary mihoatra ny iray ampahatelony (37%) no manome tsiny azy noho ny fanelingelenana ny elanelana misy eo amin'ny fiainana sy ny fiainana ara-tsosialy. Voakasik'izany ihany koa ny fitaizan-jaza, miaraka amin'ny 44% amin'ireo olona manan-janaka miaiky ny famelana azy ireo hampiasa solosaina na smartphone tsy misy mpanara-maso. Mbola avo kokoa noho izany ireo isa ireo any Amerika Avaratra (60%) sy Eropa sy Azia afovoany (58%).
Mitodika amin'ny fiantraikan'ny teknolojia fahasalamana, antsasaky ny (44%) an'ny olona rehetra milaza fa miahiahy izy ireo. Ireo olona voavaly any Afrika Atsimon'i Sahara sy i Azia atsimo dia toa sahiran-tsaina indrindra, miaraka amin'ny 74% sy 56% no matahotra ny vokadratsin'ny internet amin'ny fiadanam-po, raha 27% fotsiny no tany Eropa sy Azia Afovoany. Mifanaraka amin'ny fampiakaran'ny fitaovana ampiasain'ny vondrona, ny tanora dia miaina soritr'aretina ara-batana bebe kokoa noho ny zokiny: 50% amin'ireo mpamaly Gen Z no mitaraina noho ny havizanana, torimaso ratsy ary aretin'andoha vokatry ny fanjifana nomerika.
Manakaiky ny antsasak'adiny (48%) amin'ny valinteny no mandany fotoana betsaka kokoa amin'ny Internet noho ny tian'izy ireo, miaraka amin'ny 41% miaiky fa mahazo soritr'aretina fisintahana nefa tsy mahazo miditra amin'ny fitaovan'izy ireo. Ny tsy fahampian'ny torimaso dia olana iray lehibe ihany koa, miaraka amin'ny 51% amin'ireo mpandray anjara tsy mahita torimaso isan-kerinandro, ary iray amin'ny efatra (24%) isan'andro, hampiasa teknolojia.
Fanoloran-tena amin'ny laharam-pahamehana ny fahasalamana nomerika
Fantatr'i Ithra ny mety ho fiantraikan'izany fironana izany, i Ithra dia mandresy ny programa sonia - Sync - hanohanana sy hampiroborobo ny ezaka hatao laharam-pahamehana ho an'ny besinimaro ho an'ny besinimaro.
Anisan'izany ny fiaraha-miombon'antoka tamin'ny Desambra 2021, nampivondrona ireo mpitarika eritreritra eran-tany, andrim-panjakana, influencers, ary ny besinimaro mba hampahafantatra momba ny olana ara-pahasalamana nomerika, ary hamorona hevitra vaovao hiarovana ireo mpampiasa haino aman-jery nomerika manerantany.
Raha te hahalala bebe kokoa dia tsidiho https://sync.ithra.com/
Momba an'i Ithra
Ny Ivontoerana momba ny kolontsaina eran-tany (Ithra) King Abdulaziz dia iray amin'ireo toeran-kolontsaina manan-kery indrindra any Arabia Saodita, toerana itodihan'ireo liana te hahafanta-javatra, mpiorina ary mikatsaka fahalalana. Amin'ny alàlan'ny andiana programa, fampisehoana, fampirantiana, hetsika ary fandraisana andraikitra maharesy lahatra i Ithra dia mamorona traikefa an-tsokosoko manerantany amin'ny sehatra malalaky ny daholobe. Ireo dia mampivondrona ny kolontsaina, ny fanavaozana ary ny fahalalana amin'ny fomba izay natao hanintona ny rehetra. Amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo zava-boary, fomba fijery manahirana ary fanovana hevitra, i Ithra dia reharehan'ny aingam-panahy ho mpitarika ara-kolontsaina amin'ny ho avy. Ithra no hetsiky ny CSR saodim-pirenena Saudi Aramco ary ivon-kolontsaina lehibe indrindra an'ny Fanjakana, misy ny Idea Lab, Library, Cinema, Theatre, Museum, Energy Exhibit, Great Hall, Children's Museum ary Ithra Tower.
Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady: www.ithra.com.